स्वास्थ्य समाचार Archives - Himal Sanchar
खानेकुरा निल्नमा समस्या : कसरी बल्झिन्छ, कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
[ad_1] कहिलेकाहीँ हामीलाई खाना खाने बेलामा मात्रै नभएर पानी पिउने बेलामा समेत निल्न समस्या भएको महसुस हुन्छ । हामी औषधि खाँदैनौं तर पनि केही समयमा त्यो आफैँ निको हुन्छ । तर यही समस्यालाई लिएर कतिपयले भने यो दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याको संकेत त होइन भनेर चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ । खानेकुरा निल्नको लागि समस्या हुनु एक… Continue reading खानेकुरा निल्नमा समस्या : कसरी बल्झिन्छ, कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
Categorized as Lifestyle, निल्नमा समस्या, स्वास्थ्य समाचार
केही गलत व्यवहार नै मधुमेहको कारण बन्न सक्छ
[ad_1] मधुमेह यस्तो रोग हो, जसलाई नियन्त्रण गरिएन भने, त्यसले अरु रोग पैदा गर्छ । जस्तो कि, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मृगौला रोग आदि । तर, डराइहाल्नुपर्ने केही छैन । किनभने केही सावधानी अपनाउने हो भने यी सबै खतराबाट बच्न सकिन्छ । जब कसैलाई पहिलो पटक मधुमेह भएको थाहा हुन्छ, उनीहरू एकदम चिन्तित हुने गर्छन्… Continue reading केही गलत व्यवहार नै मधुमेहको कारण बन्न सक्छ
Categorized as Lifestyle, मधुमेह, स्वास्थ्य समाचार
[ad_1] पानी कति र कसरी पिउने ? सधैं प्रयोगमा ल्याइरहने कुरा भए पनि यो जटिल विषय हो । तर यसविषयमा विषेशज्ञहरूबीच नै एक मत छैन । वास्तवमा हाम्रो शरीरमा कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा हाम्री बस्ने क्षेत्र, मौसम र शारीरिक बनोटको आधारमा पनि फरक हुने गर्छ । तर आयुर्वेदले यस विषयमा अलग राय प्रस्तुत गरेको… Continue reading आयुर्वेद : एकदिनमा कति पानी पिउने, कुन समयमा पिउने ?
Categorized as Lifestyle, पानी, स्वास्थ्य समाचार
[ad_1] युवाहरूमा बढ्दो स्मार्टफोनको लतले बिरामीको सम्भावना बढी रहेको देखाएको छ । लण्डन लगायत विभिन्न ठाउँमा गरिएको अध्ययनले विश्वका एक तिहाइ युवाहरुमा स्मार्टफोनको लत बढेको देखाएको छ । अध्ययनले यी युवाहरूमा निद्रासँग सम्बन्धित समस्याहरु बढ्ने गरेको देखाएको हो । निद्राबाहेक पनि अध्ययनले विभिन्न किसिमका समस्याहरु बढ्ने देखाएको छ । दिनमा तपाईं कतिपटक आफ्नो फोन उठाउनुहुन्छ… Continue reading युवा पुस्तामा स्मार्टफोनको बढ्दो लत, दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याको खतरा
Categorized as Lifestyle, स्मार्ट फोन, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य समाचार
एओर्टा एन्युरिज्म : धमनी फुलेको वा यसको समस्या कसरी थाहा पाउने ?
[ad_1] एओर्टा धमनीको कुनै हिस्सा असाधारण रूपले फुल्ने स्थितिलाई नै एओर्टा एन्युरिज्म भन्ने गरिन्छ । यो फैलावट एओर्टा धमनीको कुनै पनि भागमा हुन सक्छ । जुन आकृतिका हिसाबले ट्युवको जस्तो गोलाकार हुने गर्छ । कुनै स्थितिमा सामान्य फुलाइले अर्कै आकृति पनि देखाउने गर्छ । ट्युबको आकृतिवाला एओर्टिक एन्युरिज्मलाई फ्युजिफर्म र गोलो आकृतिवालालाई सेक्युलर एओर्टिक नामले… Continue reading एओर्टा एन्युरिज्म : धमनी फुलेको वा यसको समस्या कसरी थाहा पाउने ?
Categorized as Lifestyle, स्वास्थ्य समस्या, स्वास्थ्य समाचार
शरीरलाई जरुरी फ्याटी एसिडको स्रोत के हुन् ?
[ad_1] फ्याटी एसिड अर्थात शरीरमा हुने एक किसिमको बोसो । अधिकांश फ्याटी एसिडको स्रोत खानेकुरा हुन् । जस्तो ओखर, बदाम । शाकाहारी र मांसाहारी दुवै स्रोतबाट हामीलाई ओमेगा ३ फ्याटी एसिड प्राप्त हुन्छ । ओमेगा ३ ले शरीरको प्रतिरोधक क्षमतालाई पनि बढाउँछ । त्यसो त धेरै खानेकुराहरुबाट हामीले फ्याटी एसिड पाउन सक्छौं । तर, यीमध्ये… Continue reading शरीरलाई जरुरी फ्याटी एसिडको स्रोत के हुन् ?
Categorized as Lifestyle, ब्लुबेरी, स्वास्थ्य समाचार
[ad_1] लेमनग्रासको मुख्य तत्व लेमोनल वा सिट्रल हो, जसमा एन्टीफंगल र एन्टी माइक्रोबियल गुण पाइन्छ । लेमग्रास स्वास्थ्यको लागि उपयोगी हुन्छ । लेमनग्रास भिटामिन ए, बी, सी र फोलेटको लागि राम्रो स्रोत हो । यसमा पाइने पोटेसियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, आइरन शरीरलाई स्वस्थ रही कार्यसम्पादन गर्नको लागि आवश्यक हुन्छ । यसमा पाइने एन्टीअक्सिडेन्ट (फिनोलिक यौगिक)ले शरीरमा… Continue reading लेमनग्रासको औषधीय गुण
Categorized as Lifestyle, लेमनग्रास, स्वास्थ्य समाचार
[ad_1] सन्तुलित खाना, स्वच्छ पानी, शुद्ध वायु जस्तै अपरिहार्य छ, गहिरो निद्रा पनि । चिकित्सकहरुले यसलाई औषधि समान भनेका छन् । अर्थात गहिरो निद्रा लिनु भनेको स्वास्थ्य शरीरको सूचक पनि हो । जब निद्रा विथोलिन्छ, स्वास्थ्यमा गडबड सुरु हुन्छ । अनिद्रा आफैमा एक यस्तो समस्या हो, जसले अरु समस्या पैदा गर्छ । उच्च रक्तचाप, मधुमेह,… Continue reading अनिद्राको समस्याबाट कसरी छुटकारा पाउने ?
Categorized as Lifestyle, अनिद्रा, स्वास्थ्य समाचार
बच्चामा जन्मजात हुने गंभीर रोगहरु
[ad_1] बच्चाहरुमा केही रोगहरु जन्मजात नै हुन्छन् जसको कारण बच्चाहरु पछि धेरै बिरामी बन्छन् । जन्मजात असमानताहरु शारीरिक एवम मानसिक दुवै हुन सक्छ । यसमा धेरै जसो समस्या स्नायू नलीसँग सम्बन्धित हुन्छ जसलाई ‘न्युरल ट्युव डिफेक्ट’ भनिन्छ । अझै यसमा पनि धेरैजसो ‘स्पाइना बाइफिडा’ को समस्या देखिने गरेको पाइन्छ । यी रोगहरुबाट बच्ने सबैभन्दा सरल… Continue reading बच्चामा जन्मजात हुने गंभीर रोगहरु
Categorized as Lifestyle, जन्मजात, स्वास्थ्य समाचार
सरसफाईको तीन सामान्य बानी, जुन बच्चाका लागि महत्वपूर्ण हुनसक्छ
[ad_1] सरसफाइको महत्व कोरोना अवधिमा हामी सबैले महसुस गरेकै विषय हो । सरसफाइ कायम गरेर र स्वच्छता अनुसरण गरेर हामी धेरै रोग वा संक्रमणबाट बच्न सक्छौं । जब सरसफाइ एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो, किन बच्चाहरूलाई एउटा सानो उमेरदेखि नै यसको महत्व बताउनु हुँदैन ? हरेक बच्चालाई चेतनाको विकास भएसँगै सरसफाइको बारेमा ज्ञान दिन थाल्नुपर्छ ।… Continue reading सरसफाईको तीन सामान्य बानी, जुन बच्चाका लागि महत्वपूर्ण हुनसक्छ
Categorized as Lifestyle, सरसफाई, स्वास्थ्य समाचार